Ukufa Ngokweqile Kwezidakamizwa Kufinyelela Esilinganisweni Esisha: 100,000 Onyakeni Odlule e-US
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Chofoza lapha uma lokhu kungukukhishwa kwakho kwabezindaba! » Ukufa Ngokweqile Kwezidakamizwa Kufinyelela Esilinganisweni Esisha: 100,000 Onyakeni Odlule e-US
Ngokwemininingwane emisha yeCenters for Disease Control, ukufa kwabantu abasebenzisa izidakamizwa ngokweqile e-United States sekudlule i-100,000 esikhathini esiyizinyanga eziyi-12 okokuqala ngqa. Isibalo sokufa kwabantu ngokweqile senyuke ngo-29% ngonyaka odlule. Idatha ithathwa njengeyesikhashana kodwa iyisibikezelo salokho okuzoboniswa izinombolo zokugcina.
Ochwepheshe bacabanga ukuthi lo bhubhane ubambe iqhaza ekwandeni kokusetshenziswa kabi kwezidakamizwa nokufa kwabantu, kodwa kuze kube manje, abukho ubufakazi obuqinile obukhona. Nokho, ochwepheshe abakushoyo ukuthi imfundo nokuvikela kusenesikhathi kuyisihluthulelo sokuhlehlisa lo mkhuba.
I-Candor, ehlinzeka ngemfundo yezempilo yezidakamizwa nezocansi kubafundi abafunda amabanga 4 kuya ku-8, ikhulise okuqukethwe kwayo kokufundisa ngezidakamizwa kokubili izingane nabazali. Ikharikhulamu yayo 'yeSayensi Engemuva Kwezidakamizwa' ithuthuka ngokuqhubekayo ukuze kubhekwane nezitayela zokusetshenziswa nokuhlukumeza izidakamizwa. UCandor ukholelwa ukuthi ukubandakanya abazali ezingxoxweni nezingane zabo mayelana nezidakamizwa nempilo yezocansi kuholela ekukhetheni okunempilo.
• Yiba ongeneka futhi uqale ingxoxo - Ukukhuluma emotweni kungaba indawo ekhululekile yokukhuluma - futhi ukukhuluma ngakho kanye akwanele.
• Sebenzisa izindaba zezindaba ukuze uqale izingxoxo - Uma okuthile okuhlobene nokusetshenziswa kwezidakamizwa ngokweqile kusezindabeni, kusebenzise ukuze uqale ingxoxo.
• Yabelana ngezindinganiso zakho nalokho okulindele- Isizathu #1 esenza izingane zithi azibusebenzisi utshwala nezinye izidakamizwa kungenxa yokuthi abazali bazo bazodumala.
• Misa imithetho ecacile - Ukubeka imithetho ecacile neqondile kuyisisekelo somzamo wabazali wokuvimbela. Dala imithetho nengane yakho futhi uyisebenzise ngokungaguquki.
• Gcina umkhondo wemithi - Kubalulekile ukulahla kahle imithi ngesikhathi esifanele.
• Yakhani ubuhlobo bomzali/nengane - Yidlani ndawonye lapho nikwazi futhi nikhiphe izinto zikagesi ekudleni, emakamelweni okulala, nasemisebenzini yomndeni. Yiba nesithakazelo ezithakazelweni zengane yakho.
• Yazi abangani babo - Naka ukuthi ingane yakho ihlanganyela nobani futhi uthathe ithuba lokuzethula kubazali bayo. Yiba yindlela yabo yokuphuma.
• Yazisa ingane yakho ukuthi ingakufonela noma nini ukuze uzoyithatha noma isesimweni sokucindezela kontanga. Bangakusebenzisa njengezaba ngaso sonke isikhathi.